Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » UNWTO Lalao Fanovana Fifidianana: Ahoana ny fandehany ankehitriny?
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Costa Rica • Vaovaom-panjakana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Espaniola • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Namaky 19 aho
Andro vaovao ho an'ny fizahantany manerantany! Andro vaovao ho an'ny UNWTO! Andro vaovao ho an'ny fizahantany any Costa Rica! Ao anatin'ny fanovana lalao ny tontolon'ny fizahan-tany miaraka amin'i Costa Rica izay mitarika amin'ny fizotry ny fifidianana ho avy amin'ny fivoriamben'ny UNWTO any Madrid.
ankehitriny Ny Hon. Gustav Segura Costa Sancho, minisitry ny Fizahantany ho an'i Costa Rica dia nanaisotra ny tendany tamin'ny fangatahana tamin'ny fomba ofisialy ny latsa-bato miafina mba hanamafisana indray ny sekretera jeneralin'ny UNWTO amin'ny fivoriamben'ny UNWTO amin'ny 3 Desambra 2021 ho avy.
Ity fangatahana ity dia hanafoana ny fanamafisana ny SG amin'ny alàlan'ny acclamation. Ity hetsika ity dia voalohany teo amin'ny tantaran'ny UNWTO, ary fanovana lalao.
Inona no mety hitranga raha tsy mahazo ny vato 2/3 ilaina hohamafisina mandritra ny fe-potoana hafa ny Sekretera jeneraly ankehitriny Zurab Pololikashvili? Ny fomba marina dia voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity - ary mora!
Tamin'ny hetsika tsy nampoizina androany, The Hon. Gustav Segura Costa Sancho, minisitry ny Fizahantany ho an'i Costa Rica dia namindra azy sy ny fireneny ho eo amin'ny seza mpamily ny fizahantany manerantany.
Hon. Gustavo Segura Sancho, Minisitry ny Fizahantany Costa Rica
Amin'ny anaran'ny governemantany dia nitaky tamin'ny fomba ofisialy ny latsa-bato miafina izy mba hanohanana ny tolo-kevitry ny Filankevitra Mpanatanteraka hanamafy ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO mandritra ny fe-potoana iray hafa. Ity fifidianana ity dia hatao amin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny fivoriamben'ny UNWTO ho avy any Madrid.
Maro ireo minisitra no nanantena ny hisian’izany hetsika izany, saingy tsy nisy sahy nanaisotra ny tendany na hotononina akory aza.
Amin'ny fanehoana ny fitarihana marina sy ny fanoloran-tena amin'ny fizahan-tany manerantany, The Hon. Gustav Segura Costa Sancho androany dia nanao izay nantenain'ny maro fa hitranga, saingy tsy nisy te-hanao izany.
Raha jerena ny krizy COVID-19 mitohy dia mahatonga fanamby ho an'ny firenena maro ny mandefa ny minisitry ny fizahantany na ny solontenany any Madrid, ity hetsika feno herim-po nataon'i Costa Rica ity dia antenaina fa hanentana ny hafa hanaraka izany.
Ny fandraisana anjara tsara dia ilaina tsy ho an'ny kôlejy ihany, fa mba hiantohana ny fifidianana madio sy feno ataon'ireo mpikambana ao amin'ny UNWTO. Raha jerena ny fizahan-tany dia mandeha amin'ny krizy sarotra indrindra, ny fitarihana tsara sy matanjaka dia hitondra soa ho an'ny firenena tsirairay, ny toekareny, ny asa ary ny politikany.
Marihina fa i Costa Rica no manontany, fa ny fanendrena ny Sekretera jeneraly ho an'ny vanim-potoana 2022-2025 dia hatao amin'ny latsa-bato miafina an'ireo mpikambana manatrika sy mahomby rehetra araka ny voalaza ao amin'ny fitsipika. Hampihatra izany fangatahana izany izay mifehy ny fifandraisana eo amin'ny Fanjakana / UNWTO, hoy ny Costa Rica tao amin'ny taratasiny ho an'ny sekretera UNWTO tamin'ny 15 Novambra.
FAMPITANDREMANA: Ny latsa-bato miafina dia tsy midika hoe “Latsabato elektronika”.
eTurboNews nahazo ity fampitandremana ity androany avy amin'ny mpikambana ao amin'ny boriborintany anatiny sy mpandinika UNWTO manana fahalalana amin'ny antsipiriany. Hoy izy tamin'ny eTN ..
Ny loza eo amin'ny latsa-bato nentim-paharazana sy ny latsa-bato elektronika!
Ny tohan-kevitry ny Sekretera Jeneraly dia ny hanamora ny fandatsaham-bato ao amin'ny Antenimierampirenena amin'ny alalan'ny rafi-pifidianana elektronika.
Ny tena mahaliana dia ny sekretera jeneraly ankehitriny dia manao tolo-kevitra mitovy amin'izany Andininy faha-16. Ity singa ity dia manolotra fanovana ny fitsipi-pifehezana ho an'ny Fihaonambe (A/24/16).
Ny antony mahatonga ny Sekretera jeneraly amin'izao fotoana izao hifidy ity fomba ity dia mazava ho azy:
Tsy azo amboarina ny vatom-pifidianana sy ny teller satria azo jerena manomboka amin'ny A ka hatramin'ny Z.
Tsy azo amarinina ny latsa-bato elektronika.
Ny latsa-bato elektronika dia mety ho voafehin'ny Sekretariat mora foana, satria izy ireo no mifehy ny fitaovam-pifidianana. Mety tsy hiantoka ny tsiambaratelon'ny latsa-bato koa ny latsa-bato toy izany. Mety hanery ireo firenena izay mety nanome toky am-bava izany, saingy te-hizotra amin'ny lalana hafa.
Inona marina no hitranga raha tsy voamarina ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili tamin'ny 3 Desambra?
Raha tsy manaiky ny tolo-kevitry ny Filankevitra mpanatanteraka ny toeran’ny Sekretera jeneralin’ny Fikambanana ny Fihaonambe.
Ny GA dia hanome toromarika ny Filankevitra Mpanatanteraka amin'ny fivoriana faha-115 hatao any Madrid, Espaina, ny 3 Desambra 2021, hanokatra dingana vaovao amin'ny fifidianana ny Sekretera jeneralin'ny Fikambanana.
Manome toromarika ny Filankevitra mpanatanteraka fa manana tetiandro farafahakeliny telo volana sy enim-bolana fara-fahakeliny ny fizotran’ny fifidianana toy izany, manomboka amin’ny vaninandro fanokafana ny zotram-pifidianana.
Mandidy ny Filohan’ny Filankevitra Mpanatanteraka sy ny Sekretera Jeneralin’ny fikambanana mba hampiantso ny Filankevitra mpanatanteraka faha-116 sy Fivoriambe miavaka, amin’ny volana Mey 2022, amin’ny toerana sy daty hofaritana.
Anarana ho Sekretera jeneralin'ny Antenimierandoholona, ​​Atoa Zhu Shanzhong, Tale Mpanatanteraka, izay handray ny andraikitra toy izany miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Filohan'ny Filankevitra Mpanatanteraka, manomboka ny 1 Janoary 2022.
Fomba sy tetiandrom-pifidianana ny Sekretera jeneralin'ny Fikambanana ho an'ny fe-potoana 2022-2025
Desambra 3, 2021: Fankatoavana ny lalam-pifidianana sy ny tetiandrom-pifidianana tamin’ny fivoriana faha-115 an’ny Filankevitra mpanatanteraka tany Madrid, Espaina.
Desambra 2021: Fanambarana momba ny fahabangan-toerana hapetraka ao amin'ny tranokalan'ny UNWTO ary manorata teny hoentina halefa amin'ny mpikambana rehetra izay manondro ny fe-potoana farany fahazoana fangatahana.
11 March 2022 (daty hanamafisana): Fe-potoana handraisana ny fangatahana, izany hoe, roa volana alohan'ny fitokanana ny fivoriana faha-116 an'ny Filankevitra mpanatanteraka ao Madrid, Espaina, ny 11 May 2022 (daty hohamafisina).
Amin’ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny filatsahan-kofidiana dia ampandrenesina ireo kandidà ny maha-ara-dalàna ny filatsahan-kofidiany.
11 Aprily 2022 (daty hanamafisana) : Fanamarihana am-bava hivoaka manambara ny filatsahan-kofidiana voaray (30 andro mialoha ny fitokanana ny filankevitry ny mpanatanteraka faha-116 ny fe-potoana fanapariahana ny filatsahan-kofidiana).
11-12 Mey 2022 (daty hohamafisina): Fifidianana izay ho voatendry ataon’ny Filankevitra Mpanatanteraka amin’ny fivoriana faha-116 hatao any Madrid, Espaina, tanàna foiben’ny Fikambanana.
13 May 2022: Fifidianana ny Sekretera jeneraly ho an'ny vanim-potoana 2022-2025 amin'ny fivoriana tsy ara-potoanan'ny Fihaonambe hatao any Madrid, Espaina.
Fitsipika, fomba fiasa ary printy kely:
Fizotry ny fifidianana ny sekretera jeneralin'ny UNWTO:
Misy dingana roa ny fifidianana ny sekretera jeneralin'ny UNWTO:
Fizotram-pifidianana ao amin'ny Komity Mpanatanteraka izay, rehefa mandray ireo kandidà, ny Filan-kevitry ny Mpanatanteraka dia mifidy hanolo-kevitra ho an'ny Fihaonambe ny kandidà iray.
Ny kandidà atolotra dia ankatoavin'ny Fihaonambe (na tsia).
Ny andininy faha-22 ao amin'ny satan'ny UNWTO dia mametraka mazava tsara fa ny fifidianana sekretera jeneraly dia tsy maintsy ataon'ny roa ampahatelon'ny mpikambana mahomby sy ankehitriny:
Mandritra izany fotoana izany, ny andininy faha-38, andalana faha-2, dash e) amin’ny fitsipiky ny Fihaonambe, dia milaza fa ny fifidianana ny Sekretera jeneraly dia horaisin’ny ankamaroan’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ankehitriny sy manankery.
Taty aoriana, ny andininy faha-43 amin’ny fitsipiky ny fivoriambe dia milaza mazava fa tsy maintsy atao amin’ny alalan’ny latsa-bato miafina.
Fanaon’ny sekretera jeneraly amin’ny alalan’ny acclamation ny fifidianana, saingy tsy tafapetraka amin’ny fitsipika ankehitriny izany fa efa fomba.
Raha Fanjakana mpikambana iray ihany no manontany fa ny fifidianana atao amin'ny latsa-bato mangingina dia ampy ny miala ny fomba amam-panao acclamation ary mandehana amin'ny fifidianana miafina ataon'ireo mpikambana manatrika sy mahomby rehetra.
Raha te hofidiana na hofidiana indray, ny kandidà atolotry ny Filankevitra mpanatanteraka, dia tsy maintsy mahatratra 2/3 amin'ny mpikambana rehetra manatrika sy mandatsa-bato.
Raha toa ka tsy misy ny fifidianana indray ny Sekretera jeneraly, dia ny Fihaonambe dia hanao fifanarahana ao amin'ny fandaharam-potoana laharana faha-9 amin'ny Fifidianana ny Sekretera jeneraly, izay manome baiko ny Filankevitra Mpanatanteraka hanokatra dingana vaovao amin'ny fanendrena ny Sekretera jeneraly. Sekretera jeneralin'ny UNWTO.
Ny andininy faha-22 amin'ny sata mifehy ny UNWTO dia mivaky hoe:
"Ny sekretera jeneraly dia tendren'ny roa ampahatelon'ny mpikambana feno tonga sy mifidy ao amin'ny Antenimiera, amin'ny tolo-kevitry ny Filankevitra, mandritra ny efa-taona. Havaozina ny fanendrena azy. ”
Tapitra amin’ny 31 desambra 2021 ny fe-potoam-piasan’ny Sekretera jeneraly ankehitriny. Noho izany dia anjaran’ny Fihaonambe ny manendry sekretera jeneraly ho an’ny vanim-potoana 2022-2025 amin’ny fivoriana tsy ara-potoana izay tokony hatao eo amin’ny toerany sy ny daty hanaovana izany. voafaritra amin'ny 2022.
Noho izany, mifanaraka amin'ny andininy faha-22 amin'ny sata sy ny fitsipika faha-29 amin'ny fitsipi-pifehezan'ny Filankevitra mpanatanteraka, ny Filankevitra Mpanatanteraka dia takiana amin'ny fivoriana faha-116 (11-12 Mey 2022).daty hohamafisina)) hanoro olona iray ho amin'ny Fihaonambe. Ity antontan-taratasy ity dia manome ny fomba fiasa sy ny fandaharam-potoana hanaovana izany fifidianana izany.
Ho an'ny tanjon'ity fanendrena ity dia aroso ny harahina ny fomba fanao efa napetraka ary indrindra indrindra fa izany ny fitsipika noraisin’ny Filankevitra ho an'ny fifantenana ny olona voatendry ho an’ny toeran’ny Sekretera jeneraly tamin'ny fotoam-pivoriana fahatelo amby roapolo tamin'ny Mey 1984 (fanapahan-kevitra 17(XXIII)), nampian'ireo nolaniana tamin'ny fivoriana fahefatra amby telopolo tamin'ny Novambra 1988 (fanapahan-kevitra 19(XXXIV)), ary tamin'ny fivoriana fahefatra amby efapolo tamin'ny Novambra 1992 (fanapahan-kevitra). 19 (XLIV)) dinihina.
Ireo lalàna voalaza etsy ambony, izay nampiharina hatrany amin'ny fanolorana ny toeran'ny sekretera jeneraly hatramin'ny 1992, dia manome fa:
"(A) Ny olom-pirenena mpikambana ao amin'ny WTO ihany no mety ho kandidà;
“(b) ireo kandidà dia atolotra amin’ny fomba ofisialy amin’ny Filankevitra, amin’ny alalan’ny Sekretera, ataon’ny governemantan’ny Fanjakana izay maha-olom-pirenena azy, ary ireo tolo-kevitra ireo dia tokony ho voaray tsy ho ela (daty hofaritana), ny mari-pamantarana manome porofo momba izany;
(C) ny latsa-bato dia hatao amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina mifanaraka amin'ny Fitsipika momba ny fifidianana amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina mifandraika amin'ny fitsipiky ny fomba fanao ao amin'ny General Assembly;
“(d) ny latsa-bato dia ho tapa-kevitra araka ny Andininy faha-30 amin’ny Sata sy ny Fitsipika faha-28 amin’ny Fitsipika momba ny Filankevitry ny Filankevitra, amin’ny alalan’ny maro an’isa tsotra, voafaritra ho dimampolo isan-jato miampy iray amin’ireo latsa-bato manan-kery;
(E) ny fisafidianana olona voatendry iray avy amin'ny filankevitra dia hotanterahina, mifanaraka amin'ny Fitsipika 29 amin'ny Fitsipika momba ny lamin'ny filankevitra mandritra ny fivoriana manokana, ary ny sasany amin'izany dia fivoriana ferana, toy izao manaraka izao:
“(i) ny fifanakalozan-kevitra momba ny kandidà dia hatao mandritra ny fivoriana manokana mametra izay tsy misy afa-tsy ireo delegasiona mifidy sy mpandika teny; tsy hisy firaketana an-tsoratra ary tsy misy horonam-peo momba ny fifanakalozan-kevitra;
“(ii) mandritra ny fandatsaham-bato ny mpiasan'ny sekretaria ilaina amin'ny fandatsaham-bato dia ekena;
“(f) ny Filankevitra Mpanatanteraka dia manapa-kevitra ny tsy hanolotra kandidà iray natolotry ny governemantan'ny Fanjakana mpikambana amin'ny tara tsy ara-drariny (andininy faha-12 amin'ny Fitsipika momba ny famatsiam-bola mipetaka amin'ny Sata);
"G) Ny filankevitra dia tsy mifidy afa-tsy olona voatendry iray hanolorany tena ho ao amin'ny Antenimiera."
Ankoatra izany, ny fomba nametrahana ny fandraisana ny fanendrena izay nampiharina nanomboka tamin'ny 1992 dia manome izao manaraka izao momba ny fanolorana ny fanendrena:
“Samy Ny fanendrena dia tokony ampiarahana amin'ny curriculum vitae sy fanambarana momba ny politika sy ny tanjon'ny fitantanana, maneho ny hevitry ny olom-boatendry momba ny fomba hanatanterahany ny asan'ny Sekretera jeneraly. Ireo antsipiriany ireo dia hangonina amin'ny endrika antontan-taratasin'ny Filankevitra ary ampitaina amin'ny Mpikambana ao anatin'ny fe-potoana voatondro..
“Mba hisian'ny fitovian-jo eo amin'ireo voatendry sy hahazoana antoka fa azo vakina ny antontan-taratasin'izy ireo, dia soso-kevitra ny hamehezana ny curricula vitae amin'ny pejy roa sy ny fanambarana momba ny politika sy ny tanjon'ny fitantanana amin'ny pejy enina. Haseho araka ny filaharan’ny abidy ao amin’ny antontan-taratasin’ny Filankevitra ny fanendrena”.
Nanomboka tamin'ny 1992, ny fe-potoana voatondro handraisana ireo kandidà (izay tohanan'ny governemanta mifandraika amin'izany, curricula vitae ary ny fanambarana finiavana dia tsy maintsy ampifandraisina marina) dia natsangana tamin'ny roa volana mialoha ny fotoam-pivoriana izay takian'ny Filankevitra mpanatanteraka hifidianana olona iray. Ny Sekreteratera noho izany dia mampahafantatra ny Mpikambana rehetra amin'ny alalan'ny fanamarihana am-bava ny fandraisana ny fanendrena tsirairay.
Nanomboka ny taona 1997 dia nanao famelabelarana am-bava ny firotsahan-kofidiany sy ny fikasany nandritra ny fotoam-pivondronan’ny Filankevitra ireo olom-boatendry ho amin’ny toeran’ny Sekretera jeneraly. Antsoina amin'ny filaharan'ny abidia espaniola amin'ny anaram-bositra, nomena fotoana mitovy ireo voatendry hanaovana ny famelabelarany izay tsy arahin'ny fifanakalozan-kevitra.
Araka ny fitsipika 29(3) ao amin'ny Fitsipika momba ny Filan-kevi-pitantanana, ny tolo-kevitry ny Antenimieram-pirenena momba ny fanendrena ho amin'ny toeran'ny Sekretera jeneraly: “dia ataon'ny maro an'isa tsotra amin'ny Mpikambana ao amin'ny Filankevitra manatrika sy mifidy2. Raha tsy misy kandidà mahazo ny maro an’isa amin’ny latsa-bato voalohany, ny faharoa ary, raha ilaina, ny latsa-bato manaraka mba hanapahan-kevitra eo amin’ireo kandidà roa nahazo vato be indrindra.”
Mifanaraka amin'ny fomba fanao tsy tapaka ataon'ny Fikambanana, tsaroana ao amin'ny fanapahan-kevitra 17 (XXIII) tamin'ny 1984, ny maro an'isa tsotra dia "famaritana ho 50 isan-jato miampy iray amin'ireo vato manan-kery". Io fitsipika io dia nohamafisina tamin'ny 1988 sy 1992 (fanapahan-kevitra 19(XXXIV) sy 19(XLIV)). Raha misy isa hafahafa, dia toa mifanaraka amin'ny lojika, miaraka amin'ny dikan'ny teny mahazatra sy ny fomba fanao mahazatra, ny mamaritra azy io fa tsy maneho ny isan'ny vato avo kokoa noho ny antsasaky ny vato azo avy hatrany.3.
Raha ny fomba fiasa amin'ny "fandaharana faharoa" sy ny "fifidianana manaraka" voalaza ao amin'ny Fitsipika faha-29(3), raha toa ka ilaina izany, dia ny fanazavana nomen'ny Mpanolotsaina ara-dalàna ao amin'ny Taratasy momba ny Fifidianana ny Sekretera jeneraly tamin'ny 1989 ary nanamafy. tamin'ny taona 2008 (16(LXXXIV)) no hihatra raha toa ka misy kandidà roa no mizara ny laharana faharoa amin'ny latsa-bato voalohany. Ny vokatr'izany dia ny fandatsaham-bato iray hafa (sy ny maro fanampiny araka izay ilaina mba hahazoana ny maro an'isa takiana) dia halamina eo amin'ireo kandidà telo mba hanapahan-kevitra hoe iza amin'ireo kandidà roa, izay nahazo vato be indrindra, no handray anjara amin'ny latsa-bato farany.
Ny fisoloan-tenan’ny Fanjakana iray avy amin’ny Mpikambana feno ao amin’ny Fikambanana iray mandritra ny fifidianana izay ho voatendry dia hanaraka ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Fihaonambe tamin’ny fivoriana faha-19 tao amin’ny Repoblikan’i Korea tamin’ny taona 2011 (resolution 591(XIX)), amin’ny fivoriana faha-20 ao amin’ny Zambia/Zimbabwe tamin'ny 2013 (resolution 633(XX)) ary tamin'ny fivoriana faha-21 tany Kolombia tamin'ny 2015 (resolution 649(XXI)).
Tsiahivina fa ireo mpikambana izay ampiharina amin'ny Andininy faha-34 amin'ny lalàna sy andalana faha-13 amin'ny lalàna mifehy ny lalàna amin'ny fotoana anaovana ny fifidianana dia tsy mahazo tombontsoa ho mpikambana intsony amin'ny endrika serivisy sy ny zon'ny mpifidy ao amin'ny Antenimiera ary ny Filankevitra raha tsy nomena azy ireo fanafahana vonjimaika amin'ny fampiharana izany fepetra izany avy amin'ny Assembly.
Ny fomba fiasa voalaza ao amin'ity antontan-taratasy ity dia nampiharina tamim-pahombiazana, ary tsy niteraka fahasarotana manokana, ho an'ireo fanendrena natao nanomboka tamin'ny 1992.
Mifanaraka amin'ny tolo-kevitry ny Vondrona Fanaraha-maso iraisan'ny Firenena Mikambana (JIU) mifandraika amin'ny fifantenana sy ny fepetran'ny asa fanompoana ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ao amin'ny Organisations System ao amin'ny Firenena Mikambana (JIU/REP/2009/8), dia angatahina ny mpangataka tsirairay mba hampiditra azy. taratasy fanamarinana ny fahasalamana nosoniavin'ny tobim-pitsaboana fantatra amin'ny fanolorana ny firotsahany hofidiana araka ny voalaza ao amin'ny paragrafy 6.
Araka ny voalaza ao amin'ny fitsipika 27(2), ny teny hoe "Mpikambana manatrika sy mifidy" dia midika hoe "Mpikambana manatrika sy mifidy na manohana na manohitra". Noho izany, ny fandatsaham-bato sy ny vato banga dia raisina ho toy ny tsy mifidy.
Hetsika horaisin’ny Filankevitra mpanatanteraka
Asaina ny Filankevitra Mpanatanteraka:
Manapa-kevitra fa ny fitsipika nolanian'ny Filankevitra momba ny fifantenana ny olona ho amin'ny toeran'ny Sekretera jeneraly amin'ny fivoriana fahatelo amby roapolo tamin'ny May 1984 (fanapahan-kevitra 17(XXIII)), ampian'ireo nolaniana tamin'ny fivoriana fahefatra amby telopolo tao amin'ny Ny novambra 1988 (fanapahan-kevitra 19(XXXIV)), ary amin’ny fotoam-pivoriana fahaefatra amby efapolo tamin’ny Novambra 1992 (fanapahan-kevitra 19(XLIV)) dia hojerena ihany koa amin’ny fivoriana faha-105;
Mba hanamafisana fa, ho an'ny fandikana ny fitsipika mifehy ny fifidianana ny Sekretera jeneraly sy ny fanapahan-kevitra voalaza ao amin'ny andalana (a) etsy ambony, dia tokony hojerena ny votoatin'ity antontan-taratasy ity;
Manasa ireo firenena mpikambana mba hanolotra kandidà ho amin'ny toeran'ny sekretera jeneraly mandritra ny vanim-potoana 2022-2025, hiantohana fa tonga any amin'ny foiben'ny Fikambanana ny fanendrena azy ireo (Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Espaina) roa volana mialoha ny fitokanana ny fivoriana faha-116 an'ny ny Filankevitra Mpanatanteraka, izany hoe, amin'ny 24:00 ora Madrid, 11 martsa 2022 (daty hanamafisana), farafahatarany;
Mangataka ireo kandidà hanolotra, miaraka amin'ny mombamomba ny tantaram-piainana sy ny asa, fanambarana momba ny politika sy ny tanjon'ny fitantanana, maneho ny heviny momba ny fomba hanatanterahany ny asan'ny Sekretera jeneraly; SY
Mba hanamafisana fa ny fivoriana faha-116 ao amin'ny Filankevitra mpanatanteraka no hifidy izay voatendry dia tokony hatolony amin'ny fivoriana tsy ara-potoanan'ny Fihaonambe ho an'ny toeran'ny Sekretera Jeneralin'ny Fikambanana mandritra ny vanim-potoana 2022-2025.